Tarisa uone kana paine graphical nharaunda yakaiswa kubva kune koni | Linux Vakapindwa muropa
Zvichida kuti wakabatana neseva uri kure uye unofanirwa kuziva kana iyo system yauri iri ine desktop nharaunda yakaiswa kana kana iwe uchingogona chete kushanda kubva kunyaradzo. Kana, zvingangodaro kuti iwe waifanirwa zvakare kutonga komputa yemuno mauri watove necomputer mode svondo yakatanga uye iwe hauzive kana paine desktop desktop yakaiswa.
Chero zvazvingaitika, zviripo nzira dzakasiyana siyana kugona kuziva kana paine graphical nharaunda yakaiswa kubva kune iyo koni, iine mashoma mashoma mirairo ayo anokupa iwe ruzivo nezve kuvapo kana kwete kwenzvimbo. Uye zvakare, idzo dziri nyore nzira ...
1 1 nzira
2 2 nzira
3 3 nzira
Kubva kuCLI, unogona kutarisa kana paine GUI pachirongwa uchishandisa mafaira ekumisikidza uye madhairekitori anowanzo shandiswa nharaunda yedesktop. Semuyenzaniso:
Nemurairo iwoyo, iwe unonyora izvo zvemukati / usr / bin / * chikamu. Uye kana iwe ukawana chero mhedzisiro mune zvinobuda, iwe unozoziva kuti pane chokwadi pane desktop desktop yakaiswa. Semuenzaniso, zvinoenderana nekuti uri GNOME, KDE Plasma, nezvimwewo, zvinogona kusiyana mumhedzisiro, asi zvinogona kuva / usr / bin / gnome-session, / usr / bin / mate-session, / usr / bin / lxsession, / usr / bin / icewm-chikamu...
Zvimwe nzira yakafanana neiri pamusoro zvaizoenda nekunyora zvirimo mune imwe dhairekitori pane system uye kumirira mhedzisiro. Mune ino kesi zvingave:
Unogona kuyedza mirairo miviri, imwe yeiyo graphic zvikamu iyo inoshandisa graphical server X uye yechipiri yeiyo Wayland protocol. Kana iwe ukawana mhedzisiro, saka unogona kufungidzira kuti kune desktop desktop yakaiswa.
Kunyangwe paine dzimwe nzira dzakawanda, imwe yedziripo idzo dzinogona kuvepo kushandisa musiyano kubvunza iyo desktop nharaunda iyo yakaiswa mune distro, kudzorera zita racho. Semuyenzaniso:
Asi chenjera, shandisa nzira yaunoshandisa kubvunza, kuti mafaera aya aripo hazvireve kuti zvinoshanda ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » Tarisa uone kana paine graphical nharaunda yakaiswa kubva kune koni
Pane here zvimwe zvinotsiva Android zvefoni mbozha?